Simon Beckett uye yake nhema nhevedzano neye forensic anthropologist David Hunter. | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo wemunyori Simon Beckett: (c) Katrin Binner
Nehurombo takatanga gore rino nenzira yakasviba kwazvo. Kugadziriswa kwekutsakatika kwenhau kwemukadzi mudiki Diana Quer kwete nekufungidzira kuguma kwake uye kusunga mhondi yake yaakareurura kwave kuri nenjodzi shoma. Zvakare, forensics tasvika pamberi uye isu takanzwa nezvemashoko senge saponification uye vamwe maitiro epanyama erufu sezvakasikwa kwavari sezvavanokombamira mugari wemugwagwa. Kuno kuSpain tine mamwe akanakisa uye ini handina kukwanisa kurangarira iyi tetralogy yemunyori wechirungu Simon Beckett.
Yakawira mumaoko angu chaizvo makore mana apfuura nguva ino uye ndinofunga ndakaiverenga mune rinopfuura mwedzi. Mhosva dzake akangwara forensic anthropologist David Hunter, protagonist yemanoveli, ini ndaive ndakabatwa zvakanyanya sekufadzwa kwandakaita (nekuti kutyisa kunogara kuchinakidza) yakadzama uye yakajeka tsananguro yebasa rinoitwa nenyanzvi idzi. Ini ndinokukoka iwe kuti utarise, kunyanya uyezve, iyo yakasviba vaverengi.
2 David Hunter Mutsara
2.1 Iyo Chemistry yeRufu (2006)
2.2 Pakati pemadota (2007)
2.3 Whisper wevakafa (2009)
2.4 Inzwi revakafa (2011)
3 Ndichipedzisa ...
Beckett Akazvarwa muSheffield uye gore rino anosvika makore makumi mashanu. Akadzidza Chirungu philology uye akashanda kwenguva yakati semudzidzisi kuno kuSpain. Zvanga zviri mutori wenhau freelance kwemapepanhau akati wandei eChirungu enhau uye mimwe mishumo yaakaita yakashanda sehwaro hwemanovel ake.
Atengesa kudarika 8 mamiriyoni makopi emabhuku ake kutenderera pasirese achitenda, pamusoro pezvose, kune dzino nhevedzano ine nyeredzi David Hunter. Akaburitsa mamwe emanoveli, nguva dzose mukati mevatema mhando, uye aive wekupedzisira kumubairo senge Demba rendarama uye anokunda vamwe, vakadai Marlowe.
David Hunter Mutsara
Makemikari erufu (2006)
David Hunter ari London forensic anthropologist nyanzvi muzvitunha zvekuora maitiro. Akave akagadzwa sachiremba wenyika munyika yeNorfolk musha kwemakore matatu. Akazvisiya zvese mushure mekufirwa nemukadzi nemwanasikana mutsaona yemotokari yaasingakwanise kudarika. Hupenyu hwake hwerunyararo hunochinja kana iyo mutumbi wakaora kwazvo wemukadzi wechidiki ane mapapiro eswan akabatanidzwa Kuseri.
Mapurisa emuno anomukumbira rubatsiro, asi dambudziko nderekuti iyo nharaunda inodzvinyirira yemumusha neparanoia yakagadzirwa nemupristi weparishi, haazobatsire mumibvunzo yake. Uye panouya muviri wechipiri wemumwe mukadzi, Muvhimi anofanirwa kushanda nguva yacho. Neraki, ane shamwari dzakasara uye anokwanisa kudzoreredza a kudanana naJenny, mudzidzisi wemusha.
Pakati pemadota (2007)
Hunter ave achibatanidzwa mukuferefetwa kuGlasgow, asi kuwanikwa kwe charred chitunha pachitsuwa chidiki uye chiri kure cheiyo Hebrides zvinomumanikidza kuenda ikoko. Mukambani yemapurisa maviri uye nerubatsiro rwemutikitivha ari pamudyandigere, achabatanidzwa mune chakavanzika chematsotsi akateedzana uko kubva kune vashoma vanogara muzvitsuwa kusvika kune vaviri vanoitira nzvimbo vanogona kuve fungidziro.
Saka isu tine zvakare a yakavharwa uye yakasarudzika nharaunda umo munyori anobata zvine hunyanzvi mavara kuita kuti usahadzika munhu wese. Muvhimi achafanirwawo kufunga nezvehukama hwake naJenny, sezvo asiri kuita zvakanaka. Kuguma kunoshamisika zvakare, senge iri munoverengeka yekutanga, uye zvinoda kutorera Hunter hupenyu hwake.
Kuzevezera kwevakafa (2009)
Muvhimi akamusiya naJenny uye zvakare nekuda kwekuguma kunorwadza kwebhuku rapfuura akasarudza kuenda United States. Akadzidza pane kufona Muviri wepurazimuTennessee, iyo chete nzvimbo yepasi apo forensics inodzidzira pazvitunha chaizvo. Ikoko anosangana zvakare nemurairidzi wake uye shamwari, chiremba. Tom lieberman. Vaviri vachatarisana ne mhondi isina kumboitika uyo asingouraye chete noutsinye, asi zvakare anoita kunge achiziva zvese nezvehunyanzvi hwehunyanzvi.
Zvakare nhoroondo ine Nhoroondo yakanaka kwazvo inokanganisa uye vanochengetedza kusagadzikana nguva dzese. Uye zvakare, Hunter anozokwezva kune mutikitivha mudiwa wevatungamiriri vaongorori pane iyi kesi, asi achange achishamisika.
izwi revakafa (2011)
Ago makore masereHunter paakange akaroora uye nemwanasikana wake, iye akapinda mu tsvaga mitumbi yevasikana vaviri akaurayiwa ne psycho anonzi Jerome Monk… Asi zvitunha hazvina kuoneka. Iye zvino Hunter anogamuchira kushanya kubva muongorori terry, aibatanidzwa mukuferefeta uye waasina kuwirirana naye.
Terry anomutaurira izvozvo Monk apunyuka mujeri uye Hunter achafanirwa kudzokera kunzvimbo, nzvimbo yekumaruwa yemoorland. Muvhimi anozozviona izvo Hapana chiri zvazvinoita uye kuti avo vanobatanidzwa mune iyo kesi vane chekuvanza. Uye zvakare isu tine hunyengeri kubva pakutanga kusvika pakupedzisira, nemamiriro ayo ane njodzi uye ayo ekupedzisira anokanganisa chiratidzo cheimba yeBeckett.
A chaizvo yakanaka nhema nhema, ine agile rondedzero uye nyore kuverenga. Kune vanonyanya kukakama vanoda ve genre.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Simon Beckett uye yake nhema nhevedzano neye forensic anthropologist David Hunter.